Vaovao - Inona no atao hoe che cheseeur
Kitapo Cheetaher ao anaty boaty
Afaka semi-collapsible Jerry Can
Momba an'i KAIGUAN
Inona no che cheseeur
Mihabetsaka ny mpanjifanay manomboka mampiasa che cheseeur hamenoana vokatra ranoka.
Avy eo, inona ny che cheseur?
Izy io dia fitoeran'entana vaovao izay manambatra ny fahafaha-mihetsika ao anaty kitapo ary ny tombony azo avy amin'ny vokatra fonosana henjana na semi-henjana, izay mahatonga ny chefatainer ho safidy tonga lafatra amin'ireo safidy rehetra ireo. Izy io dia ahitana kitapo plastika miendrika kioba, sosona na valizy ary boaty baoritra.
Ny firafiny miendrika kioba dia manome azy fitoniana lehibe sy fahafaha manafoana fara-tampony. Manana sosona roa izy: sosona ivelany: (polyamide + polyethylene) miaro amin'ny ôksizena sy ny hamandoana; ny hakitroka sy ny firafiny dia miova arakaraka ny filan'ny mpanjifa. Ny fitambaran'ireo sosona roa dia manome ilay fitoeran-javatra rafitra miovaova nefa nohamafisina.
Rehefa feno, miaraka amin'ny boaty baoritra, dia azo stackable tanteraka, mamorona paleta azo antoka sy azo antoka. Rehefa foana, ny singa ao aminy dia azo entina sy tehirizina mivalona, ​​ka mampihena be ilay toerana ilaina. Ity fihenam-bidy ity dia mitarika amin'ny fitsitsiana ara-toekarena.
Cheiguroer dia azo ampiasaina amin'ny karazana ranon-javatra sy semi-ranon-javatra rehetra ho an'ny fihinanana indostrialy sy an-trano. Ireo sehatra lehibe kendreny dia ny:
• Simika sy agrochemicals (lubricants, loko, adhesives, inks, fiompiana, biby fiompy, fitsaboana rano, solika ranon-javatra, fanafody fanafody ary kosmetika). • Detergents • Lubricants • Sakafo sy zava-pisotro (sake Japon, vinaingitra, tsiro, purées, saosy, fitoeran-toaka, zava-pisotro, kafe, solika, ranom-boankazo ary vokatra vita amin'ny ronono).
Manampy ny mpanjifa hampihena ny vidiny ny mpisoloky.
L 60% ny fihenan'ny vidin'ny fitahirizana entana
L 20% Fampihenana ny vidin'ny angovo
L 50% Fihenan'ny vidin'ny fitaterana
L 90% Fampihenana ny vidin'ny fanodinana
Ny boaty baoritra che cheseer dia manana tombony:
Ny boaty baoritra dia azo ahodina 100%.
Faritra lehibe sy azo ovaina tanteraka ho an'ny fifandraisana sary.
Ny fanatontosana sy ny palletising novaina tanteraka, izay mampihena ny vidin'ny lozisialy.
Samy hafa habe sy famolavolana namboarina tanteraka hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa na ny vokatra tsirairay.
Fotoana fandefasana: Sep-06-2020
Ny vokatra enta-mavesatra lehibe ao KAIGUAN dia che cheseer (kitapo mitsangana ao anaty boaty), cubitainer ldpe, fitoeran-drano azo mikorotsaka, milina azo aforitra ary milina mameno.
No. 15, Niutang Town, Distrikan'i Wujin, Changzhou City, faritanin'i Jiangsu, Sina.
© Copyright - 2010-2022: Voatahiry ny Zo rehetra.